Samsung ayaa ku dhawaaqi doonta bilaabida Laabsida todobaadyada soo socda | Androidsis
The Samsung Galaxy Fold wax badan ayuu ballanqaaday, laakiin wax walba waxay umuuqdaan in sumadda Kuuriya ee cagaha u ah iibinta taleefankeeda isku laaban. Sidaas darteed, Samsung waxay daahisay iibinta terminal inay qaadaysay tallaabo aad u weyn si loo abuuro nooc kale oo khibrad moobiil ah.
Qoraal ay soo saartay, Samsung waxay ku xaqiijisay inay dib u dhigeyso daah-furida laabta si aan loo hubin inay gaadho suuqa si ay u siiso khibrada ugu wanaagsan ee isticmaale. Waana ka hadlaynaa terminaal ku dhow kudhowaad $ 2.000.
Toddobaadkan waxaan ka baranay dhibaatooyinka ay tifaftirayaasha warbaahinta kaladuwan kala kulmeen Galaxy Fold. Telefoon isku laaban kaase dhibaato ayuu kala kulmay shaashadda, qof walba ku xidhan ilaaliye la saaray qaar baa u horseeday dhibaatadaas guddiga.
Samsung waxay rabtay inay taas xoojiso toddobaadyada soo socda waxay shaacin doonaan taariikhda rasmiga ah iyo dhamaadka daahfurka aaladda, markaa waxay umuuqataa in taariikhda Fold aysan halkan ku dhamaan.
Sidoo kale waa la fahmi karaa taas teknoolojiyad noocaas ah taasina waxay noo horseedaysaa nooc kale oo khibrad ah oo leh mobilo awood u leh in loo beddelo kiniin, waxay u baahan tahay tijaabooyin ka wanaagsan; kuwa ugu liita waxay ka yimaadeen daabacayaasha helay unug ay ku tijaabiyaan.
Waxaan wajahaynaa shirkad taas awood u yeeshay inay ka baxdo dhibaatooyin kale oo daran sida kuwa ku dhacay Xusuusta 7 iyo baytariyadaas qarxay, markaa wax walwal ah kama qabno waayo-aragnimadii ay horey u soo qaateen awgood. Samsung oo soo saartay Galaxy S10 oo soo dhaweyn balaaran kala kulantay bulshada Android isla markaana aan dhawaan heysan doono Note 10 si aan usii wadno muujinta in qofka aan qatar galin uusan guuleysan. Xaaladdan oo kale waxay geliyeen khatar ka badan intii loo baahnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Waa kama dambeys: Samsung ayaa si aan la cayimin dib ugu dhigeysa iibinta Galaxy Fold